Ka dhig Faith, March Forward -Celebrating Guuradii 11aad ee Shandong Senmao Makiinado Co., Ltd - Shiinaha Shandong Senmao Makiinado
On May 14, 2018, si ay ugu dabaal-guuradii llth ee abuuritaanka Shandong Senmao Makiinado Co., Ltd, our guddoomiyaha, Mr. Dexue Ma, abaabulan dalxiiska ee Buur Tai. Waxa kale oo ay ahayd markii safarka wadajir sanadlaha ah ee shirkadda.
Shandong Senmao Makiinado Co., Ltd waa shirkadda isku dhafan oo la takhasusay cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta qalabka qoryo ku salaysan mishiino guddiga. inta badan waxyaabaha Our: mashiinka kulul jaraa'id, mashiinka jaraa'id qabow, mashiinka xaareysa plywood si toos ah, ku laayeen falinjeeerka automatic miinshaar, line-soo-saarka guddiga deegaanka dabiiciga ah iyo noocyada kale oo badan oo ka mid ah khadadka wax soo saarka.
Waxaan u hoggaansamaan design bilaabo sare mishiino dhibic, shuruudaha tayo sare leh, adeegyada caadiga ah sare iyo dadaalaan si ay u isticmaalaan farsamada sare iyo adeegyada dadka bini'aadamnimada, si ay u abuuraan brand-heer caalami ah.
Waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha our abuuri karaan mucjisooyinka cusub ee horumarka ah ee aad mustaqbalkiisa.
Waxaan rajeyneynaa in iskaashiga mudada dheer kula daacad ah!